ဝါရှင်တန် WIC | JPMA, Inc
WIC ရုံးသို့မဟုတ်ဖုန်း # ကိုရှာပါ။
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်ပြီး 200 WIC ရုံးများကျော်ရှိပါတယ်။ သငျသညျအနီး WIC ရုံးကိုရှာဖွေရန်:
မိသားစုကျန်းမာရေး Hotline Call 1-800-322-2588
WIC ကိုစာသားရေးပါ 96859
WIC Store တစ်ခုဘယ်လိုရှာရမလဲ
Q: ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိ WIC အစားအစာသက်သာခွင့်များကိုအက်ပ်တွင်အဘယ်ကြောင့်မမြင်နိုင်သနည်း။
သင်၏လက်ရှိ WIC ကဒ်ကိုအက်ပ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားပါ
အကျိုးကျေးဇူးများကိုအက်ပ်တွင်မမြင်မီ EBT ပံ့ပိုးသူထံရောက်ရှိရန်လိုသည်။ အက်ပ်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်မျှခွင့်ပြုပါ။ ထို့နောက် R ကိုအသာပုတ်ပါefresh ခလုတ် in အကြှနျုပျ၏အကျိုးကျေးဇူးများ သင်၏အခွင့်ထူးပမာဏအသစ်ကိုအက်ပ်တွင်အသစ်ပြောင်းရန်။
ယင်းကိုအသာပုတ် Refresh ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ အတွင်း အကြှနျုပျ၏အကျိုးကျေးဇူးများ သင့်ရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို refresh ရန်
အကယ်၍ သင်သည်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အစားအစာကိုမျှမတွေ့ပါကသင့်တွင်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်ကိုသိပါကအကျိုးကျေးဇူးများကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းစတင်သည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကို“ အနာဂတ်အကျိုးကျေးဇူးများ” အောက်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။
အပေါ်ကိုအသာပုတ် အနာဂတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကြည့်ပါ ကျွန်ုပ်၏အကျိုးခံစားခွင့်များမျက်နှာပြင်တွင်။
Q: မွေးစားမိသားစုများသည်ကလေးတစ် ဦး ထက်ပိုသော WIC ကဒ်ကိုဤအက်ပ်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ မွေးစားမိသားစုများသည်တူညီသောအက်ပ်တစ်ခုတွင် WIC ကဒ်တစ်ခုထက် ပို၍ မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်။
ကလေးတစ် ဦး စီ၏ WIC သက်သာခွင့်များကိုကြည့်ရှုရန်
Allowed - WIC ကဤပစ္စည်းကိုခွင့်ပြုသည်။ သင်၏ WIC ကဒ်ကိုအက်ပ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည်အထိဤ“ ခွင့်ပြုထားသော” သတင်းစကားသည်သင်၏မိသားစုအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နှစ်သားလေးသည် WIC မှနို့လုံးကိုရရှိသည်။ အကယ်၍ သင့်မိသားစုတွင်တစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမရှိပါကနို့တစ်လုံးလုံးသည်သင်၏ WIC အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ စစ်ဆေးမှုစင်တွင်သင်နို့တစ်လုံးလုံးမဝယ်နိုင်ပါ။
မ WIC ကို item - ဤပစ္စည်းသည် WIC ခွင့်ပြုထားသောအစားအစာစာရင်းတွင်မပါ ၀ င်ပါသို့မဟုတ်ဤအစားအစာကိုခွင့်မပြုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မမြင်ဖူးသောပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်စု: ဤမက်ဆေ့ခ်ျသည်လတ်ဆတ်သောထွက်ကုန်များနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုကြည့်ပါ။
ရထိုက်သောအကျိုးခံစားခွင့်မရှိပါ - ဤပစ္စည်းသည် WIC အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်သင်အားသင်ဤပစ္စည်းကိုမပေးအပ်ထားပါ၊ သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရန်သင့်တွင်အကျိုးကျေးဇူးအလုံအလောက်မကျန်ပါ။
သိရှိနိုင်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး - ဆိုလိုသည်မှာ app သည်ဘားကုဒ်ကိုမဖတ်နိုင်ပါ။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမည့်အစားအစားအစာဘားကုဒ်အောက်ရှိဂဏန်း ၁၂ လုံးပါ UPC နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်“ Key Enter UPC” ခလုတ်ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Q: ကျွန်ုပ်၏လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့ကို“ WIC ပစ္စည်းမဟုတ်” ဟုအဘယ်ကြောင့်စစ်ဆေးသနည်း။
A: WIC သည်လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအများဆုံးခွင့်ပြုသည်။ လတ်ဆတ်သောသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အသီးသီး၌ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်ရှိသည်။ ဒီကုဒ်များအားလုံးစတိုးဆိုင်များအကြားအတူတူမရှိကြပေ။ ဤအကြောင်းကြောင့်၎င်း app သည်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားလုံးကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ အချိန်မရွေး app သည်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။WIC ပစ္စည်းမဟုတ်ပါ”။ ကိုသုံးပါ WIC Allow အစားအစာများ ခွင့်ပြုထားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများအတွက်အက်ပ်ရှိခလုတ်။
Q: ကျွန်ုပ်၏ WIC ကဒ်သည်ကျွန်ုပ်၏လတ်ဆတ်သောလတ်ဆတ်သောသစ်သီးများသို့မဟုတ်အခြားလတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအဘယ်ကြောင့်မပေးခဲ့သနည်း။
A: WIC သည်လတ်ဆတ်သောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအများဆုံးခွင့်ပြုသည်။ အသေးစိတ်အတွက်အက်ပ်ရှိ WIC စျေးဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် WIC Allowable Foods ခလုတ်ကိုကြည့်ပါ။ WIC အကျိုးကျေးဇူးများသည်လတ်ဆတ်သောထွက်ကုန်များအတွက်မပေးနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ သင့်ထံမှအောက်ပါအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များပိုလေလေ။ ဥပမာ၊ ပန်းသီးသို့မဟုတ်ဘလူးဘယ်ရီအကြောင်းပြောမည့်အစား Gala ပန်းသီးသို့မဟုတ်အော်ဂဲနစ် Driscoll blueberries ကိုကျွန်ုပ်တို့သိရန်လိုသည်။
နေ့စှဲဖြေ - ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့နေ့။
ဆိုင်နာမည် နှင့် တည်နေရာ.
စတိုးဆိုင်တစ်ခုစီသည်လတ်ဆတ်သောကုန်ပစ္စည်းများအား WIC ကုဒ်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာစေရမည် အကယ်၍ စတိုးဆိုင်များမှပစ္စည်းတစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ရန်လွဲချော်ပါကကုန်ပစ္စည်းသည်ထွက်ခွာသည့်နေရာ၌ WIC အစားအစာအဖြစ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမည်မဟုတ်ပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းရှိ“ ငါမ ၀ ယ်နိုင်!” ခလုတ်ကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။ သင်တို့သည်လည်းငါတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ် wawicfoods@doh.wa.gov.
A: WIC ကိုခွင့်ပြုသည်ဟုသင်ထင်သည့်အခါဤခလုတ်ကိုသုံးပါ၊ သို့သော်သင် Checkout စင်သို့ရောက်သောအခါငြင်းပယ်သည်။ ဒီခလုတ်ကကျွန်တော်တို့ဆီကိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပို့ပေးတယ်၊
ပစ္စည်းများကိုခွင့်ပြုပါက၎င်းတို့ကို WIC အတည်ပြုစာရင်းတွင်ထည့်ပါ။
အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင် WIC ပစ္စည်းများကိုစတိုးဆိုင်တွင်ငြင်းဆိုခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်တွက်ချက်သည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပေးနိုင်သလောက်အသေးစိတ်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည် -
ပစ္စည်းအသေးစိတ် - ဥပမာ Darigold lactose free 1% milk
အစားအစာအထုပ်အရွယ်အစား - အောင်စအရေအတွက်၊ သို့မဟုတ်ကွတ်တုံးများ၊
12 ဘားကုဒ်နှင့်အတူတည်ရှိသော XNUMX ဂဏန်း UPC ကုဒ်
Q: WIC အစားအစာမေးခွန်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်မေးမြန်းနိုင်သနည်း။
A: သင်၏ WIC ဆေးခန်းကိုမေးမြန်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်ပြည်နယ်ရှိ WIC အစားအစာအဖွဲ့သို့မေးခွန်းများမေးနိုင်သည် wawicfoods@doh.wa.gov.